मिश्रको राजसी पिरामिड, राजाहरूको उपत्यकाको आँखा चिहान prying लुकेका एक पटक नील दुवै बैंकहरू मा फस्टाए एक सभ्यता मात्र स्मारक छैन। विशाल necropolis रुचि र मिश्री मन्दिर प्राचीन साथ। नाम र हामी यस लेखमा राख्न सबैभन्दा उदाहरणात्मक संरचना फोटो।
तर पहिलो तपाईं पुरातन मिश्र मा एक मन्दिरको अवधारणा बुझ्न आवश्यक छ। यो शब्द को आधुनिक अर्थमा मण्डली थियो - एक कोठा विश्वासी मण्डलीको रूपमा गर्दछ, र परमेश्वरको संग प्राण को सम्पर्क स्थापना को लागि। होइन, मन्दिर दरबार घर बरु थियो। यहाँ केही परमेश्वरले धनी मानिसले आफ्नो हवेली बसोबास रूपमा बिताए। पूजाहारीहरूले - उहाँले आफ्ना सेवकहरूलाई थियो। हरेक दिन तिनीहरूले यो censers र धूप रोशनी अघि पात्रो अनुसार बलिदान चढाए, शुद्धीकरण गर्ने अनुष्ठान, परमेश्वरको लुगा मुर्ति बित्यो। मन्दिर मात्र पूजाहारीहरूले प्रविष्ट सक्छ - र अरू कुनै एक। कहिलेकाहीं परमेश्वरले दरबार बाहिर आफ्नो नातेदार को कुनै पनि भ्रमण गर्न। उहाँले पारंपरिक जहाज towed थिए डुङ्गा (जहाज) मा यात्रा। त्यसपछि मात्र साधारण मानिसहरूलाई आफ्नो भगवान मनन सक्छ गर्न सक्नुहुन्छ।
sacral वास्तुकला विकास
तपाईं थाह छ, पुरातन मिश्र को इतिहास राज्यहरू - धेरै लामो अवधि छ। चर्च वास्तुकला बिस्तारै विकास गरे। यो धेरै हदसम्म गरेकोले परिवर्तनहरू शताब्दीयौंको पनि छन् जो धार्मिक दृष्टिकोण, निर्भर। दुर्भाग्यवश, मन्दिर नयाँ अवधारणा अनुसार पुनर्निर्माण थियो, र हामी नयाँ राज्य सम्बन्धित मात्र निर्माण सुने। पनि राम्रो पुरातन समयका स्मारक मन्दिर संरक्षित। तर तिनीहरूले पिरामिड आसन्न फिरऊनको र आफ्नो tombs को posthumous पंथ समर्पित छन्। यहाँ हामी नयाँ राज्यको प्राचीन मिश्री मन्दिर हेर्न। यो अनन्त परमेश्वरको Abode छ। यो मन्दिर यसको आफ्नै वास्तुकला, तदनुसार, यसको आफ्नै अवधारणा छ र। "महल" परमेश्वरको officialdom र निजी, निजी चौथाई लागि ठाउँ इरादा। उत्तरार्द्ध मात्र चुनिएको पुजारी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राम्ररी सफाई (स्नान, बाल depilation, सोडा को ग्रहण) बित्यो। भगवान Windows बिना भित्री कोठामा बास। छ, यो मान्छे को आँखाबाट लुकेको थियो।
वर्ष 3000 ई.पू. परमेश्वरको दरबार। ई।
मिश्रको मन्दिर प्राचीन (फोटो स्मारक तीर्थस्थलका Chephren छ) को पाँच हजार वर्ष इच्छुक बाह्य पर्खालहरु र eaves तिनीहरूलाई crowning एक विशाल parallelepiped को फारम लिए। यो एउटा वास्तविक शाही विशाल भित्री संग, दरबार मुख्य अक्ष स्थित छन् थियो। यसलाई परमेश्वरले अनुरोध सुने जहाँ औपचारिक हल र स्वागत क्षेत्रहरु, थियो। यसबाहेक, भण्डारण भेटी लागि लबी र कोठा को रियर Chambers थिए "घर को मास्टर।" हृदयमा परमेश्वरको प्रत्यक्ष मन्दिरमा। उहाँले चार वा छ मुख्य chapels घेरिएको थियो। नजिकको sacristy र अन्त्येष्टि सेवाहरू अन्य कोठा थिए। मुख्य हल तीन aisles दुई ठूलो स्तम्भहरू विभाजित भएको थियो। छत नै थिएन। वास्तवमा, यो porticoes एक चोकमा थियो।
मध्य राज्यको प्राचीन मन्दिर
Thutmose म र विशेष गरी महिला फिरऊनले Hatshepsut सुरु हुने (1505-1484 ई.पू.।) लेआउट अभयारण्य परिवर्तन। मध्य राज्य मन्दिरको एक विशेषता सुविधा sanctum sanctorum गर्न प्रमुख Monumental हल बन्नेछ। बस आश्चर्यजनक एउटा सानो कोठरी विपरीत। यो कोठा मा उत्कृष्ट जहाज थियो। प्राचीन मन्दिर को विशाल पर्खाल धेरै sacristies र chapels प्रतिस्थापित। तर मुख्य नवीनता चित्रहरु को असाधारण richness थियो। तिनीहरूले ढाकिएको स्तम्भहरू, छत, पर्खाल, तल्ला। समय धार्मिक वास्तुकला को एक विशिष्ट उदाहरण Karnak (आमोन आरए) मा मिश्री मन्दिर प्राचीन भनिन्छ र एल Bahri (पवित्र मन्दिरमा Hatshepsut) हिम्मत गर्न सकिन्छ। भित्री चित्रकला र प्रत्येक कोठा को समारोह जोड। र मन्दिर नै ब्रह्माण्ड र परमेश्वरको संश्लेषण रूपमा देखिन्छ। सेक्स - आकाश, स्तम्भ क्यापिटल - - फूल को architrave मा देख्न सक्नुहुन्छ ताराहरूको चित्रित छत भूमि छ शानदार चरा।
1500 ई.पू. मा मन्दिर। ई।
बिस्तारै, धार्मिक रीतिथितिहरू मा Lay विश्वासी समावेश थिए। स्वाभाविक, तिनीहरूले पनि चर्च मा "holies को पवित्र" अनुमति थियो। तर नियमन sacral भवनहरु 1500 देखि डेटिङ ई.पू., एक वा बढी भेगका चोकहरूमा, एक colonnade घेरिएको - त्यहाँ नवीनता छ। त्यहाँ साधारण मानिसहरूलाई धार्मिक समारोह मा भाग लिन अनुमति दिइएको थियो। त्यसैले प्राचीन मिश्रको नयाँ राज्य मन्दिर के थिए? तिनीहरू स्थित थिए? Abydos (आधुनिक Luxor उत्तर) गर्न अपस्ट्रिम मा अबू Simbel देखि - तिनीहरूले नील साथ सुत्छन्। प्रत्येक प्रान्त (क्षेत्र) यसको संरक्षक देवता (वा आमोन-ra को व्यक्ति) भएको थियो। तसर्थ, पुरातन मिश्री मन्दिर नाम उपयुक्त थिए: Osiris, Hathor, Isis, Khnum, Thoth, Nehbet, बाजको टाउको, Sobek। Ramesses द्वितीय, नेटवर्क म III र Thutmoses अन्य: हामी पनि पनि देवताहरूको मानिन्छ जो फिरऊन को बासस्थान, उल्लेख गर्नुपर्छ।
पुरातन मिश्री नयाँ राज्यको मन्दिरको योजना
यो Karnak मन्दिरमा Amun को क्लासिक उदाहरण विचार गर्नुहोस्। मन्दिर नदी पहुँच मानिन्छ थियो। यो गर्न, नील देखि उहाँले च्यानल मार्फत भङ्ग। यसलाई त्यहाँ सजिसजाउ moored एक डुङ्गा थियो जहाँ मन्दिर एउटा सानो आयताकार पोर्ट, नजिकै समाप्त हुन्छ। मिश्रको देवताहरूको जसले जन्मदिन लागि "घरमा" उपस्थित धेरै नातेदार थिए। को Waterfront देखि "सडकको प्रक्रिया।" थियो उनको फ्रेम sphinxes वा भगवान को मूर्तिहरू, एक पवित्र जनावर को भूमिका मा देखिन्छ। Pylons FACADES मिश्रको मन्दिर प्राचीन द्वारा preceded थिए। फोटो अलिकति sloping पर्खालहरु संग पत्थर को विशाल संरचना देखाउँछ। यसलाई "बादल मडारिरहेको" को लागि वर्ण दोहोरिन्छ। सुरुतिर मा, सूर्य सही pylon को टावर बीच देखियो। यसको भित्ताहरू प्रचुर मात्रामा सजाया थिए। अझै पनि प्वाल झण्डा पोल संरक्षित। को pylon स्थित आयताकार चोकमा लागि, एक पर्खाल घेरिएको। यसको परिधि स्तम्भहरू सुरक्षा छैन वर्षा र सूर्य देखि रूपमा सेवा गर्दैछन् जो संकीर्ण discontinuous छत, समर्थन थिए वरिपरि। यार्ड पारित, एक मानिस pillared हल फसे। छत समर्थन राउन्ड स्तम्भहरु papyrus thicket शैली थियो। कोठा को टाढा अन्त मा एक पवित्र मन्दिरमा थियो। घन मा पोर्टेबल किश्ती आराम एक कम छत संग एउटा सानो कोठा खडा। यहाँ र परमेश्वरको बास।
बाहिरी पर्खाल (TEMENOS) भित्र वरपरको क्षेत्र पनि एक सेन्ट मानिन्छ। त्यहाँ सहायक कोठा छन्। यसको लागि अतिथि "रहन" गर्न देवताहरूको र आफ्नो arks कोठा हुन सक्छ। गोदामों भेटी लागि, धार्मिक वस्तुहरु एक कोठा कब्जा छैन। अन्तमा, सानो कोठा तिनीहरूले पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो शरीर सफाई को प्रक्रिया पारित जहाँ पूजाहारीहरू, लागि प्रदान गरिएको छ। मिश्र को नयाँ राज्यको मन्दिर सधैं आफ्नो क्षेत्रमा पवित्र ताल मा थियो। यो पूजाहारीहरू शुद्ध गर्न सेवा गरे। विश्वास अनुसार, सूर्य भगवान Khepera अप आकाश मार्फत पछ्याउन ताल देखि हरेक बिहान ताजा। साथै, जलाशय र वेल्स थिए। डुङ्गा लागि सीटें - प्राचीन मन्दिर, नाम र हामी यहाँ ल्याएको फोटो, को घाट विशेष कोठा थिए। परमेश्वरको जहाज बासस्थान देखि पूजाहारीहरूले आफ्नो काँध मा लगे, तिनीहरू दुई entrances यो सानो मण्डप मा एक स्टप गरे।
Obelisks र colossi
मिश्रको मन्दिर अक्सर अतिरिक्त तत्व एक बार TEMENOS पछि स्थित हो थिए। कहिलेकाहीं, अघि पवित्र मन्दिरमा colossi राखे। यो वा त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने फिरऊनको जोडी को यो विशाल मूर्ति। यहाँ उल्लेखनीय Memnon को Colossi छ। अनावश्यक मन्दिरमा संरक्षित गरिएको छ - Amenhotep III को मात्र दुई मूर्तिहरू यो दिन गर्न खडा छन्। जोडी जस्तै सामान्यतया - यो obelisks स्थापित प्रवेश गर्नु अघि मन्दिर, सूर्य समर्पित थियो।
Ptolemaic र रोमन अवधि
तिनीहरूले देवताहरूको घर रूपमा सेवा कति वर्ष, र कुनै पनि परिवर्तन, वा विजय प्रतिक्रिया थिएन: पुरातन मिश्री मन्दिर कसरी अद्भुत। यस जब रोमन साम्राज्य एक धार्मिक भक्ति को मामला मा देशमा फसेको, सानो परिवर्तन भएको छ। यसको विपरीत। रोमन emperors साम्राज्य मा सरकार को एक बन्ने, हाइरोग्लिफ्स, Osiris को पंथ संग cartouches लगाएका थाले। तथापि, interpenetration संस्कृति हुन्छ। धार्मिक मनोवृत्ति विकसित छन् र मानवता बिस्तारै एक परमेश्वरको उपासना गर्न आउँछ।
मरियम स्कट्स को रानी: जीवनी। रानी मरियम स्टुअर्ट को इतिहास
तुर्क साम्राज्य। इतिहास। Roxelana र सुल्तान Suleyman Veliky
Jojoba तेल एक बाल व्यावसायिक कस्मेटिक्स सोम PLATIN छ
जागा। प्रश्न मेनु परम्परागत भोजन।
Gunpowder चिया (चिया): लाभ र हानि